Sheekada Filimada – Page 9 – Filimside.net
Sheekada filimka Jawaan: filim Action la daawan karo leh Sai Dharam Tej bandhig ahaan ka baxsaday
December 5, 2017 Zakarie Abdi
Jawaan waa filim Telugu oo Action ah kaasi oo tiyaatarada la saaray Jimcadii aan kasoo gudubnay waxaana hogaamiye ka ah Sai Dharam Tej. Jilaayaasha filimkaan: Sai Dharam Tej, Mehrene Kaur Pirzada, Kota Srinivasa Rao, Prasanna Venkatesan, Satyam […]
Sheekada filimka Oxygen: Gopichand bandhig wacan ayuu la yimid laakiin sheeko kuma dhicin
December 1, 2017 Zakarie Abdi
Gopichand wuu soo laabtay waxaana tiyaatarada loo saaray filimka Oxygen oo ah filim Telugu ah kaasi oo Action iyo fariinta arimaha qoyska ka hadlaayo. Director: Jyothi Krishna Jilaayaasha filimkaan: Gopichand, Raashi Khanna, Anu Emmanuel, Jagapati Babu, Sayaji […]
November 18, 2017 Zakarie Abdi
Waxaa Jimcadii tiyaatarada la saaray filimka Aksar 2 oo ah qaybtii labaad filimkii Aksar ee sanadii 2006 guusha dhex dhexaadka ahaa gaaray. Jilaayaasha filimkaan: Zareen Khan, Gautam Rode, Lillete Dubey, Abhinav Shukla, S. Sreesanth, Mohit Madaan. […]
November 17, 2017 Zakarie Abdi
Waxaa subaxaan tiyaatarada la saaray filimka Tumhari Sulu oo ay hogaamiye ka yahay Vidya Balan waana filim shactiro, arimaha qoyska iyo mada daalo dhameestiran. Jilaayaasha Vidya Balan, Manav Kaul, Neha Dhupia, Malishka Mendonsa, Vijay Maurya Director: Suresh Triveni […]
Waxaa maanta tiyaatarada la saaray filimka safarka jaceylka ah Qarib Qarib Singlle ee uu Irfan Khan hogaamiye ka yahay kaasi oo marwalbo la imaado fariin dadka raali galiso. Jilaayaasha filimka Qarib Qarib Singlle: Irrfan Khan, Parvathy Director: Tanuja Chandra […]
Sheekada Filimka Ittefaq: Akshaye Khanna oo hareeyay Sidharth Malhotra iyo Sonakshi Sinha
Waxaa maanta tiyaatarada la saaray filimka Ittefaq oo sheeko ahaan laga soo min guuriyay filimkii Ittefaq ee sanadii 1969 Superstar Rajesh Khanna sameeyay balse sheekadiisa dib loo casriyeeyay. Hogaaamiyaasha filimkaan: Sidharth Malhotra, Akshaye Khanna, Sonakshi Sinha […]
Sheekada Filimka Telugu ah Vunnadhi Okate Zindagi: Ram Pothineni wuu ka baxsaday filimkaan
October 27, 2017 Zakarie Abdi
Waxaa maanta tiyaatarada la saaray filimka Telugu ah Vunnadhi Okate Zindagi (VOZ) waxaana hogaamiye ka ah jilaaga hormarka wacan sameenayo Ram Pothineni. Jilaayaasha filimka VOZ: Ram Pothineni, Sree Vishnu, Lavanya Tripathi iyo Anupama Parameswaran Director: Kishore Tirumala Fariinta Filimka VOZ Oo Kooban: Abhi […]
Sheekada filimka Raja the Great: Ravi Teja doorkiisa camoolenimo wuxuu ku mudan yahay in bilad lagu siiyo
October 21, 2017 Zakarie Abdi
Superstar Ravi Teja wuu soo laabtay waxaana tiyaatarada u saaran filimka la wada amaanay Raja the Great ee uu ku jilaayo door indhoole ama camoole ah waana filim Telugu ah. Jilaayaasha filimkaan: Ravi Teja, Mehreen Pirzada, Vivan […]
October 20, 2017 Zakarie Abdi
Hordhac: Bollywood-ka waxay sameeyeen aflaan badan oo shactiro ah kuwaas oo guuleesteen ama guul dareesteen balse fanka Hindiya uma badno sameynta aflaanta cabsida iyo shactirada isku jiraan (Horror Comedy). Filim shactiro iyo cabsi isku jiro […]
Superstar Vijay iyo Director Atlee 2016 waxay la imaadeen filimkii Blockbuster-ka noqday Theri haatana feestada Diwali waxay soo diyaariyeen filimka hadal heyntiisa lala yaaban yahay Mersal. Hadaba labada guusha u saaxiibka ah mucjisadii Theri kadib […]